I-Huawei Y9 Prime 2019: ifowuni elandelayo yenkampani enekhamera ye-selfie yekhamera kunye nekhamera yangasemva kathathu | I-Androidsis
El IHuawei P Smart Z Yifowuni yokuqala kaHuawei enekhamera ye-selfie, kodwa ayizukube yeyokugqibela njengoko ukuvuza okutsha kukutyhile oko Inkulumbuso elandelayo yeHuawei Y9 evela kwisigebenga saseTshayina nayo iya kuba nekhamera ye-selfie ... kunye neekhamera ezintathu zangasemva, ukongeza.
Ukuvuza kubandakanya ipowusta ethathwe evenkileni, kunye nemifanekiso yezandla yefowuni. Ikwatyhila iinkcukacha zayo. Makhe sibone konke oku kungezantsi!
Ngokwento eqokelelweyo, umphambili weHuawei Y9 Prime 2019 wabelana ngoyilo olufanayo nolo lweP Smart Z. Zombini izixhobo zinokuhamba ngokufanayo, nokuba zinamagama ahlukeneyo.
I-Huawei Y9 Prime 2019 ivuza kwipowusta yevenkile
Ngakolunye uhlangothi, isixhobo siphantse sabaneenkcukacha ezifanayo ne-P Smart Z. Iifoto zikwabonisa ukuba ineetoni ezimbini ezifanayo ezigqityiweyo ngasemva.
Ke ufumana isibonisi se-6,59-intshi ngesisombululo se-FHD + kunye ne-91.006% yomlinganiso wesikrini ukuya kumzimba kunye neKirin 710F phantsi kwe-hood, kunye ne-4GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina.
Ikhamera yeselfie yeselfowuni inzwa ye-16 MP (f / 2.2)Ngelixa iikhamera zangasemva eziphindwe kathathu zibandakanya inzwa ye-16 MP (f / 1.8), i-8 MP (f / 2.4) inzwa ene-lens engile ebanzi, kunye ne-2 MP (f / 2.4) ye-sensor enzulu. Iikhamera zilungelelaniswe nkqo ngasekhohlo zinee-sensors ezimbini ezabelana ngendlu enye, ngelixa lesithathu ligcinwe ngokwahlukeneyo.
Kukho ibhetri ye-4,000 mAh ehlawulisa ngezibuko le-C yohlobo C kunye neskena somnwe esingasemva esibekwe ngasemva. Ixabiso elinamahemuhemu kuthiwa lingaphantsi kwe- $ 300 (~ $ 270), ebiza ixabiso eliphantsi kunexabiso lentengiso le-P Smart Z (€ 279 / ~ $ 313).
Akukho lwazi ngomhla wokukhutshwa kunye nokufumaneka, kodwa kufuneka ikhutshwe kwakamsinyane njengoko sele kukho imiqondiso ezivenkileni kwaye umntu othile ufumene izandla zakhe kwiyunithi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Huawei Y9 Prime 2019: ifowuni elandelayo evela kwinkampani enekhamera ye-selfie yekhamera kunye nekhamera engasemva kathathu